Ra'iisul Wasaare Kheyre Oo Kormeeray Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Iyo Dekadda Muqdisho (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Kormeeray Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Iyo Dekadda Muqdisho (Sawirro)
Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Kormeeray Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Iyo Dekadda Muqdisho (Sawirro)
November 21, 2018 551
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta kormeeray wasaaradda maaliyadda, Dekadda Muqdisho iyo xarunta maamulka gobalka Banaadir si uu ugu kuur galo habsami u socodka hawlaha loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed.
Wasaaradda maaliyadda ayuu Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kula kulmay wasiir ku-xigeenka wasaaradda, Prof. Cabdullaahi Sheekh Cali (Qaloocow), oo uga warbixiyay hawlaha ka socda wasaaradda oo ay kamidka yihiin geeddi socodka cafinta daynta lagu leeyahay dalka, iyo horumarinta aruunrinta dakhliga dawladda.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay shaqada ballaaran ee wasaaradda ay hormuudka u tahay ee lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka, waxa uuna faray wasiir-ku xigeenka in lasii laba jibbaaro dadaallada lagu dardar-gelinayo fulinta qorshayaasha qaranka u ah si loo xaqiijiyo hadafka guud iyo hiigsiga danaha qaranka Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaaraha XFS ayaa kormeeray qaybaha iyo xafiisyada kala duwan ee dekadda Muqdisho, waxa uuna kulamo la qaatay maamulka sare ee dekadda oo uu kala hadlay xoojinta dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sidoo kale kormeeray xarunta maamulka gobalka Banaadir, oo uu kula kulmay guddoomiyaha gobalka, Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow).
Ra’iisul Wasaaraha ayaa guddoomiyaha gobalka kala hadlay dardar gelinta barnaamijyada horumarinta gobalka, adkaynta amniga, soo celinta bilicda caasimadda iyo dardar gelinta Barnaamijka Is-xilqaan.
Kormeerka ayaa qayb ka ahaa hawlaha kor-joogteynta lagula socdo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hey’adaha kale ee dawladda, qorshahaas oo ku salaysan isla xisaabtan, hufnaan iyo daah-furnaan.
Duqeyn Diyaaradeed oo Maalintii 3-aad ka socota Koofurta Mudug